Gini mere ndi ahia ahia eji ebido ulo ahia brik na ngwa agha | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 20, 2018 Na Mọnde, Nọmba 20, 2018 Jessica Bruce kwuru
Zọ kachasị mma maka ụdị iji nye ndị na-azụ ahịa ihe mara mma bụ ịcha ndị na-emechitere ya ọnụ. Ndị pere mpe bụ go-betweens, obere ka azụta ihe maka ndị na-azụ ahịa. Enweghị ụzọ dị mma iji mee nke a karịa ijikọ na ndị na-azụ ahịa site na ịntanetị. Na 2.53 ijeri ndị ọrụ smartphones na ọtụtụ nde kọmputa kọmputa, na 12-24 nde ụlọ ahịa eCommerce, ndị na-azụ ahịa anaghịzi adabere na ụlọ ahịa ụlọ ahịa maka ịzụ ahịa. N'ezie, nhazi data dijitalụ dị ka ịzụ omume, ozi nkeonwe, ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, dị mfe karịa usoro ndị ahịa na-anọghị n'ịntanetị nke ndị na-azụ ahịa.
N’ụzọ doro anya, yana ụfọdụ echiche azụmahịa e-commerce kpọmkwem, ọnụ ụzọ ntanetị dị ugbu a na-egosi nnukwu mmasị ịmepe brik na ngwa ọrụ ha. N'aka nke ọzọ akpọrọ clicks na brinks, ihe ịtụnanya a ka bụ ihe ọtụtụ mmadụ na-apụghị ịghọta.
Tụle data, USA na-enwe nnukwu osooso na ụdị nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-emechi ụlọ ahịa anụ ahụ ha ma gbanwee ahịa e-commerce. Ọtụtụ ụlọ ahịa na-achọpụta na ọ na-esiri ha ike ịnọgide na-echekwa ụlọ ahịa ha. Na nghọta, na USA naanị, ihe karịrị ụlọ ahịa 8,600 mechiri ọrụ ha na 2017.
Ọ bụrụ na, nke a dị otú ahụ, gịnị kpatara na ụdị ịntanetị na-alaghachi na brik? Ọ bụrụ na ọnụ ngwanrọ n'ahịa na edemede mere ka ọ dị oke ọnụ iji mepee ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na obere ọnụ ala, gịnịzi mere ị ga-eji tinye ego ọzọ?
Mgbatị, ọ bụghị nnọchi!
Iji zaa ajụjụ a, anyị kwesịrị ịghọta na ụlọ ọrụ achụmnta ego na-eji ụlọ brik na ngwa agha dịka mgbakwunye na ụlọ ahịa ha n'ịntanetị, kama ịdabere naanị na ụlọ ahịa anụ ahụ. Nke ahụ bụ, ha abụghị ihe ọzọ kama ọ bụ nkwalite nke akara aka eCommerce nke oge a. Dị na-agagharị na brik, ma na-agbatị ọnụnọ ha n'ịntanetị na ebe nrụọrụ na-anọghị n'ịntanetị.
Were Boll & Alaka ọmụmaatụ. Gaa na ụlọ ahịa Boll & Branch, ị ga-ahụ ebe ngosi mara mma nke nwere ọmarịcha ndị na-ejere gị ozi na ndị ọrụ ndị ahịa. Nwere ike ịchọta ngwaahịa ọ bụla site na ika n'okpuru ụlọ ahịa ahụ. Agbanyeghị, enwere mgbagọ na a na-ebuga ihe ị zụtara n'ụlọ gị site na mail. Lọ ahịa ahụ ka na-agbaso ụkpụrụ ire ere e-commerce ya, mana na-eji brik na ngwa agha dị ka ebe ahụmahụ, karịa ụlọ ahịa na-ere ahịa.
Ajuju ka di otu
Kedu ihe kpatara ụlọ ahịa brik na ngwa agha, mgbe ndị ahịa nwere ike zụta site na ngwaọrụ ha na-arụ ọrụ ịntanetị? Na-atụgharị azụ ka brik na ngwa agha na-anọchi anya ụfọdụ smart eCommerce echiche azụmahịa mgbe ụlọ ahịa anụ ahụ na-akwatu windo ha? Ọ́ dịghị emegide ya?
Azịza doro anya nye ajụjụ a bi na ajụjụ ọzọ:
Kedu ihe kpatara ụlọ ahịa eCommerce ji etinye ego na ịzụlite ngwa ahịa ngwa ahịa ekwentị mgbe ndị ahịa ka nwere ike zụta site na weebụsaịtị eCommerce ha?
Ọ bụ ihe gbasara ahụmịhe ndị ahịa
Otu n'ime ọghọm dị ukwuu n'ịzụ ahịa n'ịntanetị bụ ndị na-azụ ahịa enweghị ike ịnweta ngwaahịa ndị ahụ dịka ha mere n'ụlọ ahịa anụ ahụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-eji ụlọ ahịa eCommerce eme ihe dị ka ebe ha na-aga azụ ahịa, a ka nwere ngalaba na-ahọrọ ụlọ ahịa anụ ahụ n'ihi na ha nwere ike ịnwale ngwaahịa tupu ịzụta ha.
Iji mee ihe ndọghachi azụ a, ndị dike eCommerce dị ka Amazon na über dị ole na ole n'ime oge izizi iji mepee brik na arụ ọrụ arụ ọrụ dị ka mgbakwunye na ndị ibe ha n'ịntanetị. Amazon kwalitere ọrụ brik na ngwa agha ya na 2014, nke nyere ndị ahịa ahịa ahịa otu ụbọchị na New York. Na ọkwa ndị ọzọ, ọ malitere ọtụtụ ebe kiosks na nnukwu ụlọ ahịa ebe ha na-ere ngwaahịa ụlọ ma weghachite nnyefe.
N'oge na-adịghị anya, ụlọ ọrụ ndị ọzọ nakweere echiche azụmaahịa eCommerce a wee mepee obere kiosks na ebe dị iche iche. N'ihi ya, inwe ọnụnọ nkịtị bịara nwee ihe ịga nke ọma n'oge na-adịghị anya. Otu n'ime ihe atụ kachasị mma bụ ụlọ ahịa Uber na ebe ndị ama ama na-eme ka ndị na-ebugharị akwụkwọ tinye tagzi na-enweghị ngwa mkpanaka.
Echiche bụ isi bụ ịnye mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ahụmịhe ndị ahịa na ndị na-azụ ihe n'ịntanetị, na mgbakwunye na -
Kwanye azụmahịa na ụwa nkịtị
Nweta ohere inweta azụmaahịa na ntanetị na n'ịntanetị
Kwalite ahụmịhe ndị ahịa ebe ha maara ebe ha ga-eleta ma ọ bụrụ na ha nwere iwe.
Na-ekwe ka ndị ahịa na-anwale ozugbo ma kpochapụ obi abụọ banyere ngwaahịa.
N'ịchọpụta izi ezi nke ọrụ ahụ site n'ime ka ha mata “Ee! anyị bi n'ime ụwa n'ezie ”
Ebumnuche bụ isi iti asọmpi ahụ site na ịnye ahụmịhe kachasị mma nke ndị ahịa, na-edebe nkasi obi ha n'uche. Nke a nwere ike pụọ na ọdịnala ma na-abịa na echiche ndị ọhụrụ bụ isi ihe dị mkpa iji jigide ndị ahịa ma merie ntụgharị na 2018. idtụle oke asọmpi na ntanetị n'ịntanetị, ọ bụ ọrụ dị egwu ma ọ bụrụ na ịnweghị mkpali ịme ya na gị azụmahịa eCommerce.
Ndị ahịa na-echegharị n'ụlọ ahịa anụ ahụ?
Otu akụkụ dị mkpa ebe ụlọ ahịa naanị-ụlọ ahịa anaghị asọ mpi na ndị na-eme egwuregwu eCommerce bụ ndị ahịa na-enwetaghachi. Ewezuga ụfọdụ ndị siri ike-Fans, ụlọ ahịa anụ ahụ enweghị ike ijide ndị ahịa ọ bụla. Ebe ọ bụ na enweghị ụzọ isi mara omume ịzụ ahịa na ọdịmma nke ndị ahịa, ụlọ ahịa anụ ahụ anaghị anakọta data achọrọ maka ndị ahịa na-enwetaghachi. Ọzọkwa, karịa mgbasa ozi ọkọlọtọ, SMS, na ahịa E-mail, ọ nweghị ụzọ ọzọ isi nwee nkwukọrịta ozugbo na atụmanya. N'ihi ya, ọbụlagodi mkpọsa ego kachasị ego enweghị ike iru ndị na-ege ntị.
N'aka nke ọzọ, na ịntanetị na smartphones n'aka, ndị ahịa dị n'ịntanetị ghọrọ ihe dị mfe maka iweghachite eCommerce. E-Azụmahịa E-Commerce nwere ọtụtụ ụzọ iji chịkọta data ndị ahịa: Mpempe akwụkwọ ndebanye aha, ngwa mkpanaka, azụmaahịa mmekọ, mwepụ mmapụta, ụdị ndebanye azụ na ngwaahịa, na ọtụtụ ndị ọzọ. Site na ọtụtụ ụzọ iji nakọta data, eCommerce nwekwara ụzọ dị mma iji ruo ndị ahịa: ịre ahịa email, azụmaahịa SMS, ahịa ahịa push, mgbasa ozi ezubere iche, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Site na ọrụ nke ndị ọrụ anụ ahụ na nke dị n'ịntanetị, ịtụle ndị ahịa agafeela nke ọma. Ihe na-abụbu ọghọm nke ire anụ ahụ anaghị adịkarị aghụghọ karịa na ọrụ brik na ngwa agha. Storeslọ ahịa ndị dị n'ịntanetị nwere ike iji otu ọwa ahịa ahịa nke ntanetị aka ha n'ịntanetị ma ka na-adọta ndị ọbịa na ụlọ ọrụ ha. Ndị na-esonụ bụ otú ụfọdụ ụdị ndị a ma ama si eme nke a.
Nnukwu aha na-eji Omni-ọwa ahịa na ụzọ nke ha
Everlane guzobere onwe ya dika azụmahịa na ntanetị na 2010. Site na ịbịakwute ndị ahịa, edepụtara Everlane maka ịnye uwe dị mma na ọnụ ahịa ọnụ. Ọ gara n'ihu na-eto na nkà ihe ọmụma ya nke nghọta zuru oke, ebe akara ahụ gosipụtara ụlọ ọrụ ya, mmefu ọrụ, na ọtụtụ ụgwọ ndị ọzọ.
Na 2016 naanị, akara ahụ jisiri ike nweta a ahịa niile nke $ 51. Mgbe emechara usoro pop-elu na njedebe nke 2016, akara ahụ biri ebe ngosi 2,000-square-foot showroom na Manhattan's SoHo district. Nke a bụ nnukwu ihe na-atụle nkwupụta okwu nke onyeisi ụlọ ọrụ Michael Preysman afọ ole na ole gara aga:
Anyị ga-emechi ụlọ ọrụ ahụ tupu anyị abanye na azụmaahịa anụ ahụ.
Nke a bụ ihe ụlọ ọrụ ahụ kwuru banyere ntinye ya na ntanetị na -
Ndị ahịa anyị ga na-agwa ha na ha chọrọ imetụ aka ma metụta ngwaahịa ndị ahụ tupu ịzụta ya n'ikpeazụ. Anyị ghọtara na anyị kwesịrị inwe ụlọ ahịa anụ ahụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ itolite n'ọtụtụ mba na ụwa.
Storelọ ahịa ahụ na-ere t-shirt aha, ụlọ mmiri, denim, na akpụkpọ ụkwụ ndị a ma ama n’ụlọ. Ha ejiriwo ọnụnọ nkịtị mee ka ndị ahịa na-eleta ụlọ ahịa ahụ nwee ahụmịhe kachasị mma. Mpaghara ezumike nke nwere ọnọdụ ịchọ mma na ezigbo foto nke ụlọ ọrụ denim ha na-agbakwunye na ebube ka ọ na-akwalite ụlọ ọrụ ika dị ka ụlọ ọrụ denim kacha ọcha n'ụwa.
Ka ị na-enyochakwu, ị nwere ike ịhụ mpaghara ngosi anọ nwere mpaghara ndenye ego dị iche. Ndị na-eje ozi ihe ngosi ahụ abụghị naanị ịre uwe, kamakwa na-enyere ndị ahịa aka ịlele ngwaahịa ngwa ngwa. Ha na-ewepụta ndụmọdụ ga-ahaziri nke ọma mgbe ha nyochara profaịlụ gị agbakwunyere na ntanetị ha.
N'agbanyeghị ịbụ onye ọkpụkpọ n'ịntanetị, Glossier ghọtara na ọrụ ndị na-adịghị n'ịntanetị na-ekere òkè dị ukwuu na ịme ndị ahịa ahịa. Site na ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa na-ere ahịa, akara ahụ na-aga n'ihu na-agba ọsọ pụrụ iche. Akara ahụ na-akọwa na mmapụta ya abụghị maka ego ha nwetara kama ọ bụ iwulite obodo. Naanị ihe ọ na-eme dị ka ebe ntanetị dị ka ebe a na-enweta ahụmịhe kama ire ere.
N'oge na-adịbeghị anya, akara ngosi mara mma jikọtara ya na ụlọ oriri na ọ restaurantụ wellụ a ma ama Rhea's Café, nke dị na San Francisco. Ndozi nke mpụta ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ahụ iji kwekọọ na njirimara nke akara ahụ na pink nke otu puku afọ tiri mkpu ozi ahụ. N'oge na-adịghị ụlọ oriri na ọ restaurantụ wasụ ahụ ghọrọ etemeete ahụmahụ-ehiwe, ebe chefs sie nri dị nnọọ n'azụ enyo na stacks nke ngwaahịa si Glossiers.
Dabere na onye ọbịa nke mmapụta ahụ, ọ ga-azụta ngwaahịa Glossiers na ntanetị n'onwe ya. Agbanyeghị, ewezuga nsogbu niile, ọ hụrụ n'anya ịbịa ebe a otu ugboro n'izu iji nwee mmetụta dị mma n'ime ụlọ ahụ. Ọzọkwa, ọ na-adị egwu ịmetụ aka na imetụ ngwaahịa ahụ mgbe ị nwere ike ijide iko kọfị n'otu oge ahụ.
Mgbe a bịara na ahụmịhe ndị ahịa, ụdị uwe ndị a bụ otu n'ime ndị na-anabata ahịa ahịa Omni. Bonobos - onye na-ere ahịa ụmụ nwoke n'otu ụdị bidoro naanị na ntaneti n'ịntanetị na 2007. Ọ na-anọchite anya otu ihe atụ kachasị dabara adaba nke ụdị azụmaahịa na-aga nke ọma na-eto eto site na ịgbatị ọrụ ya na ụlọ brik na ngwa agha.
Taa, Bonobos bụ ụlọ ọrụ 100-nde dollar, nke nwere nkwenye siri ike pụrụ iche, nkwado ndị ahịa pụtara ìhè, na mma ịzụ ahịa kachasị mma. Dị ahụ nwere ike ime ka aha ya site na ịtụgharị n'ihe kacha mma maka otu ndị ahịa. Ahụmịhe na Bonobos Guideshops gafere ịnye oke gị na onye na-ere ahịa na-egosi uwe ogologo ọkpa.
Kama ịga na Bonobos na saịtị, ika na-atụ aro ntinye akwụkwọ oge atọrọ maka ahaziri nleta otu n'ime ya ọtụtụ Ntuziaka. Usoro ntinye akwụkwọ nke mbụ na-arụ ọrụ kachasị mma dịka ọ nwere ike hụ na nleta dị mma mgbe naanị mmadụ ole na ole nọ na-echekwa ma onye nnọchi anya e nyere ya nwere ike ịnye nlebara anya niile ịchọrọ iji mechaa trouser nke dabara nke kachasị mma.
Nke a bụ otú usoro dum si arụ ọrụ, dị ka Bonobos si kwuo:
Ogige ahụmịhe na ngwa agha na-enye ohere kachasị mma iji gbochie ọdịiche dị n'etiti ụlọ ahịa anụ ahụ na nke eCommerce. Usoro a e-commerce nke Omni-channel na-enyere ụlọ ahịa eCommerce aka na ịnyefe ahụmịhe ịzụ ahịa kachasị mma mgbe ị na-atụ anya atụmanya na ọnọdụ offline na n'ịntanetị. Idebe ebumnuche bụ isi na-elekwasị anya, ụdị na-ezute ọbụna atụmanya ndị ahịa dị mgbagwoju anya n'echiche niile na ijide ọwa ahịa a na-apụghị ịgụta ọnụ. N'ezie, brik na-ngwa agha abụghị ụzọ ochie ma ọ bụ akụ na-agbanwe ngwa ngwa na nke dị oke ọnụ ahịa nye ndị egwuregwu e-commerce dị adị.
Tags: amazonboll na alakaboll alakaBonobosbonobos ebe mgbere ahịaụlọ ahịa bonobosbrik-na-mortarahụmahụ ahịacxna-eduga ndị ahịaecommercemgbe obulaGlossierọnọdụ mkpọsa glossierụlọ ahịa glossierkiosksngwanrọ n'ahịaụlọ ahịa ịzụ ahịaịzụ ahịa ahụmahụüberiosber kiosks
Jessica Bruce kwuru
Abụ m ọkachamara blogger, onye ọbịa na-ede akwụkwọ, Influencer & onye ọkachamara eCommerce. Ugbu a metụtara ShopyGen dị ka ọdịnaya ahịa strategist. Ana m ekwupụtakwa ihe ọhụụ na ọnọdụ ndị metụtara ụlọ ọrụ eCommerce.
Ahịa Apple: Ihe Nkuzi 10 I Nwere Ike itinye na Ahia Gi
Nke a bụ ụzọ 6 nke ngwa ngwa ekwentị na-enyere aka na uto azụmaahịa